Google Na - ebuli oru maka ahia maka ule | Martech Zone
Ebumnuche nke Google ebidola na beta maka ndị ọrụ pere mpe. Enweela m ike debanye aha m na ịga ije n'elu ikpo okwu taa na ihe niile m nwere ike ikwu bụ - wow. Enwere ihe 3 mere m ji kwenye na nke a ga-abụ nnukwu ọgba aghara na ahịa nnwale. N'ezie, ọ bụrụ na m bụ usoro nyocha, enwere m ike ịpụ apụ ugbu a.
The onye ọrụ interface dakọtara na nyiwe ndị ọzọ dịka Google Tag Manager na Google Analytics, yabụ ọ bụrụ na ị jirila nyiwe ndị ahụ, ị ​​ga - ahụ na ị na - agagharị Google na - bulie ikuku.
A na-ewu n'elu ikpo okwu n'enweghị nsogbu Google Analytics, na-enyere gị aka iji data saịtị Google Analytics dị ugbu a iji chọpụta ngwa ngwa nke saịtị gị nke nwere ike ịbawanye mma.
Ọ bụ free. Enwere atụmatụ ndị ọzọ dị na Google Na-ebuli 360 - dị ka ichebe ndị na-ege ntị, nyocha ọtụtụ na-akparaghị ókè, ebumnuche nnabata Ad hoc, ebumnuche nnwale dị elu, ọrụ mmejuputa, nkwekọrịta ọrụ ọrụ.
Dị ka njikarịcha na nyocha ndị ọzọ niile, Google kachasị mma na-eji usoro nchịkọta akụkọ eji eme ihe, na usoro ọnụọgụ Bayesian iji gosipụta nnwale gị. Google kachasị mma na-eji ngwaọrụ ndị ezubere iche dị egwu dị ka nnwale na-ezubere iche iji mee ka ị gbasaa ahụmịhe ziri ezi nye ndị ahịa gị n'oge kwesịrị ekwesị.
Nwere ike ịtọle ule A / B, Nnwale Nnwale dị iche iche, ma ọ bụ Ntugharị Ntugharị:
Ihe ikpo okwu choro Google Chrome na a Google na-ebuli ndọtị arụnyere… mana maka ezi ihe kpatara ya. Kama inwe mbanye anataghị ikike n'ụzọ gị site na koodu na peeji nke ihe, ndọtị na-enye gị ohere ịdọrọ ma melite ihe dị mkpa.
Nke ahụ emegharịrị anyị Ebe a na-arụ ọrụ na WordPress na a video ndabere… na mba mbipụta bụla iji Google ebuli! Jide n'aka ịbanye!
Kọ akụkọ na-enye ma nsonaazụ na nyocha miri emi nke nyocha gị niile.
Debanye maka Ebuli Google
Tags: ule ulenweregoogle njikarịchanyocha googlennwale dị iche ichenjikarịchaule saịtịtesting
Dee 2, 2016 na 4: 24 AM
dị nnọọ a dee: Ọ bụ “Google kacha”, ọ bụghị “Google Optimizer” - nwere ike ị chọrọ imezi nke ahụ.
Dec 3, 2016 na 9:25 PM
Nnukwu nwute Christoph! Daalụ!